Allgedo.com » Suugaan
Home » Suugaan
Dhageyso ciyaarta Hidaha iyo Dhaqanka Soomaalida ee loo yaqaan gaaleysada.
Halkaan waxaan kusoo gudbinayaa Barnaamij gaar ah oo ku Saabsan mid ka mid ah Ciyaaraha Hidaha iyo Dhaqanka ee loogu jecel yahay Dalka Soomaaliya, gaar ahaan Ciyaarta loo yaqaano Gaaleysada oo si weyn looga Qadariyo Gobolka Gedo. Dadka u kuurgala arimaha Ciyaarta Gaaleysada ayaa waxaa ay sheegeen in ciyaartaasi in dhaqan ahaan ay soo shaac baxdey mudo haatan laga joogo ilaa 200 oo sano oo ah horaantii...
Hooyo macaan – Waa gabay uu tiriyay Xasan Bulxan Cali (akhri ama dhageyso)
Gabaygan waxaa curiyay Xasan Bulxan Cali, waxuuna ugu magac daray “Hooyo macaan”. Waa gabay si weyn ugu amaanaya qiimaha ay leedahay hooyada. Halkaan ka dhageyso gabayga “Hooyo Macaan” Ama hoos ka dhageyso: 1. Abaqaalki koobaad markii, aadan laga beermay 2. Udubkii labaad wuxuu ahaa, xaawo unugeede 3. Abuurkeeda dhoobada rabbigay, kama astaysiine 4. Ahaw baa layiri...
Asc. Dhammaan ummdda soomaliyeed meel aad joogtaanba, Allaah (Swt) ayaa mahad leh, Rasuulkiisa Maxamed (Scw) ayaa sharaf leh. Waxaan halkan uga dirayaa hambalyo iyo bogaadin, xil gudoonka xildhibaanada ummada soomaliyeed Mudane Jawaahiri waxaana leeyahay “KUGU SOO SINAYE KII SAXA AHAA OO SUUBAN NOQO”, waxaa kale oo aan sidoo kale u habalyaynayaa dhammaan xubnaha xildhibaanada iyo ummada...
Asc. Dhammaan ummdda soomaliyeed meel aad joogtaanba. Allaah (Swt) ayaa mahad leh. Rasuulkiisaa maxamed (Scw) ayaa sharaf leh. Waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa gabaygan oo aan ku eegi doono arrimo dhawr ah, gaar ahaan wuxuu si toos ah ugu socdaa Golaha Paarlamaanka Soomaaliyeed ee loo dooratay in uu masuul uga noqdo: Sharciga iyo cadaaladda, dalka, dadka, diinta iyo dawladnimada qaranka ummada ...
Soomaliya iyo siyaasiga maanta – By Abdullahi Isim
Waa madal, waa arin mudan xusuusin iyo xisaabtan dhab ah. Waa mas’uuliyad iyo xil. Waa milgo iyo mansab ummadeed; Waa haybad iyo garasho hagaan dal iyo dad Allaah (Swt), ku manaystay diin islaan. Magaca Allaah(Swt) ugu dhaartay maaraynta iyo meelmarinteeda ummaduna u egmatay Ilaalinta sharafkeeda, ciskeeda, karaamadeeda, midnimadeeda iyo qaranimadeeda. Waa maalin weyn, waxay xambaarsan tahay...
Amiir iyo Abaal waa gabay uu tiriyay A.Y. JAMA (Abdullahi Isim) ee akhri ama dhageyso.
Asc dhammaan umadda soomaaliyeed meel aad joogtaanba. Allaah (Swt) ayaa mahad leh. Rasuulkiisa maxamed (Scw) ayaa sharaf leh. Waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa gabayga hoos ku xusan. Gabaygan oo aan hadda ka hor uga dhigay dardaaran iyo duco hogaanka dhaqanka iyo dawladda ummadda Soomaliyeed ayaan mar labaad ugu soo gudbinayaa hambaliyo iyo bogaadin. Magaca gabayga ayaa ah Amiir iyo Abaal. A.Y....
Iqra iyo Al-qaarica “waa maanso cusub oo uu tiriyay abwaan Abdulahi Isim”
Asc. dhammaan ummadda soomaliyeed meel aad joogtaanba. Allaah (SWT) ayaa mahad leh, Rasuulkiisa Maxamed (SCW) ayaa sharaf leh. Waxaan halkaan idiinku soo gudbinayaa suugaanta hoos ku xusan. Suugaantan ama maansadan ayaa ka curatay maqaal ku soo baxay Shabakad ka mid ah Shabakadaha warbaahinta Soomaaliyeed, maqaalkaas ayaa xambaarsanaa Eray macnihiisu ahaa (YAY EERSANDOONTAA?). Ummadda soomaliyeed...
Maansada “Kala durugsanaa” By. Abdullahi Isim
Asc dhammaan ummadda soomaliyeed meel aad joogtaanba. Allaah (Swt) ayaa mahad leh, Rasuulkiisa Maxamed (Scw) ayaa sharaf leh. Waxaan halkan idinku soo gudbinayaa suuganta hoos ku xusan. Maansadan ayaa firsanaysa, Maansooyin iyo suugaan ka horeyey. Sida HOOYGAAN KU ABABAY, HANKA GAABAN. HADIYAD…Fakarkana la qaybsanaysa Mooryaan gareey, Garoowe iyo Gar iyo in kale oo badan. Magaca...
Maansada Qaran – By Abwaan Mohamed Dahir N. Gaani
ASC Dhamaan akhriste-yaasha AOL. Waxaan hoos idinkugu soo gudbinayaa “MAANSADA QARAN”. Haddaba, adiga oo mar walba mahadsan akhri maansada oo ah tan hoose: SOOMALI WAA SIMAN SUMMADDII AWOOWIYO SINJI BAY WADAAGTAA HIDDIHEENII SOOHNAA DHAQANKII SAL GUURYOO SUFUR BAA KA SOO HARAY SABANKAAN RAGGII KACA RUNTA WAY SALUUGAAN KHALADKAY SAX MOODAAN CEEB KAMA SARIIGTAAN SAMAHANA MA YEELAAN SUMACADEENII...
Xusuuso Suugaantii Abwaan Axmadeey Cabdi Gaashaan oo dhawaan si xun ugu dhaawacmay Tiyaatarkii Qaranka! By Daahir F. Afdheere
Abwaan Axmaddeey waxaa uu ka mid ahaa dadkii dhawaan ku dhaawacmey qaraxii ka dhacay Tiyaatarka Qaranka, waxaanna isagoo dhaawac ah uu haatan ku dayacan yahay magaalada Muqsisho. Ugu horeyn inta aanan wax ka xusun suugaantiisii, waxaan walaalaha Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u gurmadaan Abwaanka oo ay u fidiyaan taageero hiil iyo hooba leh. Masawirkaan waa Abwaan Axmadeey Cabdi Gaashaan oo ka...